२०२१ मा सर्वश्रेष्ठ एप्पल पीडीएफ रिडर अनुप्रयोग - पेनेट फर्वार्ड - आईफोन
मेरो आईप्याड असक्षम छ र यो iTunes संग जोडिएको छ भन्छन्
कसरी टी मोबाइल वाहक सेटिंग्स अपडेट गर्न को लागी
कसरी बटन बिना आईफोन पुनः सुरु गर्ने
कसरी soundcloud मा परिचित हुन
२०२१ मा सर्वश्रेष्ठ एप्पल पीडीएफ रिडर अनुप्रयोग
चाहे काममा वा स्कूलमा, तपाइँले पोर्टेबल कागजात ढाँचा, वा PDF हरूसँग डील गर्नुपर्नेछ। यो पढ्न वा मार्कअप गर्न PDF सँधै सजिलो हुँदैन, तर केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंको अनुभव सुधार गर्न सक्दछन्। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई यसको बारेमा बताउनेछौं २०२१ मा सर्वश्रेष्ठ एप्पल पीडीएफ रिडर ।
के मैले नेटिभ वा तेस्रो-पार्टी पीडीएफ रिडर प्रयोग गर्नुपर्छ?
एप्पलले नेटिभ अनुप्रयोगहरूमा पीडीएफ रिडर एकीकृत गर्न उत्कृष्ट कार्य गर्‍यो। तपाई आफ्ना आईफोन र आईप्याडमा पिडिएफहरू पढ्न र मार्कअप गर्न पुस्तकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाई आफ्नो म्याकमा पूर्वावलोकन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, एप्पलको मूल पीडीएफ पाठकहरू उत्तम विकल्प हुनेछन्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् र ती समान सुविधाहरूसँग तेस्रो-पार्टी पीडीएफ रिडर अनुप्रयोगहरू छन्।
आईफोन6पुनर्स्थापित गर्दैन
यदि तपाईं एप्पलको मूल पीडीएफ पाठकहरूको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, हामी आईफोन, आईप्याड, र म्याकको लागि हाम्रो मनपर्ने तेस्रो-पक्ष पीडीएफ रिडर अनुप्रयोग सिफारिस गर्दछौं।
पुस्तकहरू पीडीएफ पाठकको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने
तपाईंको आईफोन वा आईप्याडमा पुस्तकहरूमा पीडीएफ खोल्न, सेयर बटन ट्याप गर्नुहोस् (एर देखाउने बक्सको साथ बक्सको लागि हेर्नुहोस्)। अनुप्रयोगहरूको प row्क्तिमा पुस्तक प्रतिमा फेला पार्नुहोस् र पुस्तक अनुप्रयोगमा PDF पठाउन यसलाई ट्याप गर्नुहोस्।
पुस्तक अनुप्रयोगमा एक पटक, उपकरणपट्टी प्रदर्शन गर्न PDF मा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईंले उपकरणपट्टीमा केही फरक बटनहरू देख्नुहुनेछ।
बटन ट्याप गर्नुहोस् मार्कअप बटन (मार्कर टिप भित्रको घेरा भित्र हेर्नुहोस्) पीडीएफ एनोटेट गर्नका लागि। यहाँबाट तपाई पाठ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ, नोट लेख्न सक्नुहुन्छ र अधिक। पाठ टाइप गर्न स्क्रिनको तल्लो दायाँ कुनामा प्लस बटन ट्याप गर्नुहोस्, एउटा हस्ताक्षर थप गर्नुहोस्, पीडीएफको निश्चित अंश म्याग्निफाइ गर्नुहोस्, वा कागजातमा आकारहरू थप्नुहोस्।
AA बटनले तपाईंलाई पीडीएफको ब्राइटनेस बढाउन र तेर्सो वा ठाडो स्क्रोलि betweenको बीचमा बदल्न अनुमति दिन्छ। पीडीएफ भित्र एक विशिष्ट शब्द हेर्नको लागि खोजी बटन ट्याप गर्नुहोस्। यदि यो एक शब्द वा वाक्यांश हो जससँग तपाईं अपरिचित हुनुहुन्छ भने, तपाईं ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ वेब खोजी गर्नुहोस् वा विकिपेडिया खोज्नुहोस् अधिक जान्नको लागि स्क्रीनको तल।
तपाईंको प्रगति बचत गर्नुहोस्
यदि तपाईं विशेष गरी लामो PDF पढ्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रगति बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने कुनामा बुकमार्क बटन ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईं पुस्तकालय मा गएर ट्याप गरेर पुस्तक अनुप्रयोगमा तपाईंको सबै पीडीएफहरू हेर्न सक्नुहुन्छ संग्रह -> पीडीएफ ।
सबै एप्पल उपकरणहरू मार्फत PDF हरू हेर्नुहोस्
आईक्लाउड ड्राइभमा पुस्तकहरू खोल्नाले तपाईंलाई तपाईंको सबै एप्पल उपकरणहरू मार्फत तपाईंको पीडीएफहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। आईफोन र आईप्याडमा, सेटिंग्स खोल्नुहोस् र स्क्रिनको शीर्षमा तपाईंको नाममा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि, ट्याप गर्नुहोस् आईक्लाउड र पछाडि स्विचहरू खोल्नुहोस् आईक्लाउड ड्राइभ र पुस्तकहरु ।
अन्तमा, सेटिंग्सको मुख्य पृष्ठमा फिर्ता जानुहोस् र पुस्तकहरूमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्। अर्को पनी स्विच खोल्नुहोस् आईक्लाउड ड्राइभ तपाईंको एप्पल उपकरणहरू मार्फत तपाईंको पीडीएफ समक्रमण गर्न।
म्याकमा पीडीएफ पाठकको रूपमा पूर्वावलोकन कसरी प्रयोग गर्ने
एप्पल एक उत्कृष्ट पीडीएफ रिडर र मार्कअप उपकरण निर्माण गरीएको छ म्याकमा पूर्वावलोकनमा। त्यहाँ केहि फरक स्थानहरू छन् जुन तपाईं PDF हरू खोल्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं स्क्रिनको माथि पुस्तकालय ट्याब क्लिक गरेर पुस्तकहरूबाट पीडीएफ खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, तल PDF हरू क्लिक गर्नुहोस् पुस्तकालय अनुप्रयोगको बाँया पट्टि र तपाईंले खोल्न चाहानु भएको PDF मा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सफारीमा पीडीएफ हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको माउस वेबपृष्ठको तल्लो बिन्दुमा स्क्रोल गर्नुहोस्। एक उपकरणपट्टी देखापर्नेछ जुन तपाइँलाई हाम्रो जुम आउट, पूर्वावलोकनमा पिडिएफ खोल्नुहोस्, वा डाउनलोडहरूमा बचत गर्न विकल्प दिनुहुन्छ।
डाउनलोडहरूबाट पूर्वावलोकनमा PDF खोल्नको लागि, फाईल नाममा दुई औंला क्लिक गर्नुहोस् र स्क्रोल गर्नुहोस् यसका साथ खोल्नुहोस् । त्यसो भए क्लिक गर्नुहोस् पूर्वावलोकन ।
नयाँ ग्राहकहरु 2017 को लागी स्प्रिन्ट सौदा
हाइलाइट र नोट छोड्नुहोस्
क्लिक गर्नुहोस् हाइलाइट स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा र तपाईंको कर्सर प्रयोग गर्नुहोस् पाठ हाइलाइट गर्नका लागि। र two परिवर्तन गर्न, नोट थप्न, पाठलाई अधोरेखा गर्न, वा पाठ स्ट्राइकथ्रु गर्न तपाई हाइलाइट गरिएको टेक्स्टमा दुई-औंला क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पीडीएफ पूर्वावलोकनमा एनोनेट गर्दै
मार्कअप उपकरणहरू एकदम मिल्दोजुल्दो छ जुन तपाईंले आफ्नो आईफोन र आईप्याडमा फेला पार्नुहुनेछ। मार्कअप उपकरणपट्टी खोल्न, ट्याप गर्नुहोस् मार्कअप स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने कुनामा।
बाँया देखि दाँया, मार्कअप उपकरणपट्टीले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ:
पीडीएफ काँटछाँट गर्न, मेटाउन वा प्रतिलिपि गर्न को लागी एक क्षेत्र छान्नुहोस्
बक्सहरू, सर्कलहरू, एर्रो र ताराहरू जस्ता आकारहरू थप्नुहोस्
एक पाठ बक्स जोड्नुहोस्
एक हस्ताक्षर जोड्नुहोस्
यी उपकरणहरूको दायाँमा, तपाईं मोटाई र रेखाहरू प्रकारहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ रेखाचित्र, रेखाचित्र, वा आकारहरू थप्दा। थप रूपमा, तपाईं रेखा र colorsहरू समायोजित गर्न सक्नुहुनेछ र रंगहरू भर्नुहोस् साथ साथै पाठ बक्सहरूमा प्रयोग हुने फन्ट र टाइपफेस परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं आफ्नो पीडीएफ मार्क गर्दा गल्ती गर्नुहुन्छ भने, केवल टाइप गर्नुहोस् आदेश + z वा मेनू बारमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस् -> अन्डु गर्नुहोस् ।
विशिष्ट शब्दहरू र वाक्यांशहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्
क्लिक गर्नुहोस् खोज्नुहोस् स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने कुनामा र शब्द वा वाक्यांश टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईं PDF मा खोज्न चाहानुहुन्छ। परिणामहरू पूर्वावलोकनको बाँया पट्टि प्रदर्शित हुनेछ।
आईफोन र आईप्याडका लागि उत्तम तेस्रो-पार्टी पीडीएफ रिडर
पीडीएफको लागि एडोब एक्रोबेट रिडर विश्वव्यापी million०० मिलियन भन्दा बढी उपकरणमा स्थापना गरिएको छ। यो तपाईंको समावेशी मञ्चमा तपाईंको कागजातहरू र कार्यहरू प्रबन्ध गर्नका लागि एक उत्तम उपकरण हो।
एडोब एक्रोब्याट रिडर नि: शुल्क छ, यसको मतलब यो छ कि तपाइँ आफ्नो वित्तीय स्थिति को पर्वा बिना महान सुविधाहरूबाट फाइदा लिन सक्षम हुनुहुनेछ। इन-एप खरीदहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईं प्रीमियम सुविधाहरू अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने।
यस अनुप्रयोगले तपाइँलाई एकल क्लिकको साथ PDFs खोल्न र हेर्न मद्दत गर्दछ। सजिलैसँग अवलोकनको साथ, तपाईं निर्दिष्ट शब्द वा वाक्यांशको लागि PDF खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। यसका अतिरिक्त, तपाई जुम इन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो आँखाको लागि सबैभन्दा सहज दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं कागजातहरूको माध्यमबाट स्क्रोल गर्ने तरिका रोज्न सक्नुहुन्छ 'एकल पृष्ठ' वा 'लगातार' मोडहरू बीच चयन गरेर। यसले तपाईंको व्यक्तिगत प्राथमिकतासँग मेल खाने अनुभव पाउन मद्दत गर्दछ!
पीडीएफ एनोनेट गर्दै
एडोब एक्रोब्याट रिडरको साथ, तपाईं साथीहरू, सहकर्मीहरू, वा प्रोफेसरहरूको साथ PDFs साझा गर्न सक्नुहुनेछ र तुरून्त प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं अर्को अनुप्रयोगमा नजाँदै वा कागज खेर फाल बिना नै पाठमा सीधा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँको प्रतिक्रिया अलग देखाउन चाहानुहुन्छ? तपाईंको टिप्पणीहरूमा ध्यान दिन एch्कर गरिएको नोट वा रेखाचित्र उपकरणहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
थप रूपमा, तपाइँ एक शब्द वा पाठको भाग हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र छोटो नोट छोड्नुहोस्, जस्तै 'तपाइँको मतलब के हो ?,' 'गलत शब्द छनौट,' 'स्पष्ट पार्नुहोस्,' वा अन्य सुझावहरूले तपाइँका साथीहरूलाई उनीहरूको लेखन सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। पाठकहरू तपाइँको एनोटेशनहरू द्रुत रूपमा हेर्न र टिप्पणीहरूको सेक्सनमा उनीहरूलाई जवाफ दिन सक्षम हुनेछ।
पीडीएफ साझेदारी गर्दै
Adobe Acrobat Reader विशेष गरी सहयोगी कार्यको लागि महान हो। तपाईका सहकर्मीहरूसँग अवलोकन, समीक्षा र हस्ताक्षरको लागि कागजातहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले अरूसँग साझेदारी गर्नु भएका फाइलहरूका लागि सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईंको कामको शीर्षमा रहनको लागि र कागजातमा हुने परिवर्तनहरूका बारे सचेत गराउँदै।
भर्नुहोस् र साइन गर्नुहोस्
एक्रोब्याट रिडर फारमहरू भर्न र तिनीहरूलाई हस्ताक्षर गर्नका लागि भयानक छ। तपाईलाई गर्नुपर्ने भनेको खाली क्षेत्रहरूमा पाठ टाइप गर्नुपर्दछ। त्यसो भए, सम्भव भएसम्म थोरै प्रयासको साथ PDF कागजातहरू ईमेल गर्नका लागि केवल एक एप्पल पेन्सिल वा तपाईंको आफ्नै औंला प्रयोग गर्नुहोस्।
कागजातहरू भण्डार गर्नुहोस्
यस अनुप्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको PDF फाईलहरू सुरक्षित र सजिलैसँग पहुँचयोग्य प्लेटफर्ममा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको एडोब कागजात क्लाउड खातामा तपाईका कागजातहरू भण्डारण गर्न साईन ईन गर्नुहोस् र कुनै पनि समयमा तपाईलाई चाहिएको बहुविध उपकरणहरूमा तपाईका फाइलहरू पहुँच गर्नुहोस्! यदि तपाईं कागज प्रतिलिपिहरूसँग काम गर्न रुचाउनु हुन्छ भने, तपाईं Adobe Acrobat Reader को सहयोगमा तपाईंको उपकरणबाट सिधा कागजातहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
महत्वपूर्ण फाईलहरू चिन्ह लगाउनुहोस्
यदि तपाईंसँग कागजातहरू वा फाईलहरू छन् जुन उच्च महत्त्वका छन् वा लगातार परिवर्तनहरू हुँदै आएका छन् भने, तपाईं तिनीहरूलाई छुट्टै पहुँच गर्न एउटा छुट्टै फोल्डरमा भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सबै कागजातहरु मार्फत स्क्रोल गर्नु पर्ने बिदाइ तपाईलाई चाहिएको फेला पार्न भन्नुहोस्। मात्र प्रयोग गर्नुहोस् तारा बाँकीको अलावा महत्वपूर्ण कागजातहरू सेट गर्न सुविधा!
अँध्यारो मोड तपाइँको आँखा मा तनाव कम गर्न र एक महान सुविधा हो ब्याट्री जीवन को एक सानो बिट बचाउनुहोस् । हामीलाई लाग्छ यो एकदम राम्रो देखिन्छ।
म्याकको लागि उत्तम तेस्रो-पार्टी पीडीएफ पाठक
पीडीएफ रिडर प्रो म्याक को लागी एक महान तेस्रो पार्टी हो। Adobe Acrobat Reader जस्तै, यस अनुप्रयोगको नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको संस्करण छ।
मेरो कलहरु सीधै भ्वाइस मेलमा जाँदैछन्
केहि अन्य म्याक पीडीएफ पाठकहरूको विपरीत, पीडीएफ रिडर प्रोले वर्ड, पावरपोइन्ट, एचटीएमएल, र CSV सहित धेरै फरक फाईल प्रकारहरूमा निर्यात गर्न सक्दछ।
भाषण गर्न पाठ
पीडीएफ रिडर प्रो तपाईंको पीडीएफ ठूलो स्वरले चालीस भन्दा बढी भाषाहरूमा पढ्न सक्छ। तपाइँ एक उपयुक्त अनुभव को लागी तपाइँको मनपर्ने पठन गति र लिंग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
पीडीएफ रिडर प्रो ले तपाइँलाई तपाइँको कागजात एनोटेट गर्न को लागी बिभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। हाइलाइटरमा पहुँच गर्न मेनूको उपकरण बटन क्लिक गर्नुहोस्, पाठ बक्सहरू सम्मिलित गर्नुहोस्, आकारहरू थप्नुहोस्, र अधिक।
तपाईं पनि वाटरमार्कहरू थप्न सक्नुहुन्छ र यसमा PDF को पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ सम्पादक खण्ड।
तपाईंको उपकरणपट्टी अनुकूलित गर्नुहोस्
यदि त्यहाँ सुविधाहरू छन् जुन तपाईं प्राय जसो प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं उपकरणपट्टीलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सजीलो रूपमा पहुँचयोग्य बनाउन सक्नुहुन्छ। उपकरणपट्टीमा जहिले पनि दुई-औंला क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् नियन्त्रणहरू अनुकूलन गर्नुहोस् ।
पीडीएफ रिडर प्रो ले उपकरणपट्टीमा थप्न सक्ने सबै उपकरणहरू प्रदर्शन गर्दछ। तपाईंको मनपर्ने चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् भयो ।
तपाईंको पढाइको आनन्द लिनुहोस्!
तपाईं अब एप्पल पीडीएफ रिडर अनुप्रयोगहरूमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र तपाईंको उपकरणको लागि उत्तम विकल्प छ। के त्यहाँ कुनै अन्य पीडीएफ रिडर अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई प्रयोग गरेर रमाईलो छ? हामीलाई तल टिप्पणी सेक्सन तल जान्नुहोस्!